China tofu saka fako fanamboarana sy orinasa | Bondhot
Sina manamboatra kitapo saka tofu mora azo:
Fitaovana lehibe Tofu vaovao na fibre zavamaniry
Fitaovana fanampiny tsaramaso kafe, dite maitso, paiso tantely, karbaona mavitrika
Habe Ny halavany: 10-30mm savaivony: 3.0mm
Tahan'ny vovoka <5%
Fonosana anaty 6L na 7L ary 18L
Mandefa antsipiriany 1 Miaraka amin'ny paleta
2 Tsy misy palety
MOQ 9Tona na 12Tons
Loko Maitso na namboarina
Marika Afaka accpet OEM isika
Vita amin'ny Tofu voajanahary rehetra tsy misy akora simika
Fanaraha-maso fofona mahatalanjona
Malemy be eo am-pelatanan'ny saka
Malalaka sy mora ariana
Tsy misy Tracking
Ny fako saka Tofu dia karazana fako saka premium. Mila ny fikorontanan'ny tontolo iainana sy ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fikarakarana kitty! Ny fako saka tofu dia vita amin'ny zavamaniry voaverina, ary mahavita 2-3x tsara kokoa noho ny tanimanga na kofehy kristaly amin'ny fifohana ny fofona sy fofona.
Salama sy azo antoka. Abosorption hafahafa sy fifehezana fofona. Ireto dia vitsivitsy monja amin'ireo fampisehoana mahatalanjona azon'ny Nurture Pro Tofu Cat Litter atao! Ary satria tsy misy fametahana synthetic, akora simika, tanimanga na fofona manitra fanampiny ny formulasika, dia afaka miala sasatra ianao amin'ny fahafantarana fa tsy haratra amin'ny fomba rehetra ny saka!
Tombontsoa mety ho hitan'ny saka sy ny olona eo noho eo
Miaraka amin'ny raikipohy vita amin'ny tofu voajanahary sy akora biodegradable tsy misy vovoka 99%, miaina tombony lehibe kokoa amin'ny fahafantarana fa tsy ho voan'ny olana ara-pisefoana ianao sy ny saka ary azo esorina mora foana ny fako saka taloha!
Malalaka vovoka, clumping ary flushable. Vita amin'ny akora voajanahary 100% rehetra, TofuKitty dia maimaimpoana amin'ny vovoka, clumps ao anatin'ny segondra, maka ny hamandoana 3x tsara kokoa noho ny tanimanga sy 2x tsara kokoa noho ny fako kristaly, ary mora vonoina 100%. Tsy misy fanarahana ary tsy misy vovoka. Mandrosoa ary vita!
Toro-lalana 3-dingana hamelombelona ny boatin'ny saka anao
Step1: Fenoy ny fitoeram-pako madio amin'ny roa ka hatramin'ny roa santimetatra (2 - 5 cm) an'ny Nurture Pro Tofu Cat Litter
Step2:Esory ireo clumps ary atsipazo am-pitandremana. Mariho fa ny Nurture Pro Tofu Cat Litter dia azo ovaina ary azo ovaina amin'ny isa kely
Step3: Manampia bebe kokoa Nurture Pro Tofu Cat Litter hamelombelona ny boaty fako aorian'ny fanesorana ny fako.
Ampirisihina hitazona fako 5 sentimetatra farafahakeliny amin'ny fotoana rehetra.
Fako ao anaty fako feno fako mandritra ny iray volana isam-bolana.
Teo aloha: Fako saka voajanahary